John Sullivan gbara arụkwaghịm na FSF na agbanweela mgbanwe na FSTR | Site na Linux
John Sullivan gbara arụkwaghịm na FSF ma emekwala mgbanwe na FSTR
N’oge ikpeazụ ọphu ẹphe ta ahụmaduru emehu n'ihi ọkwa Richard Stallman banyere nloghachi ya na FSF nke puku kwuru puku mmadụ weliri olu ka e nwee ike chụpụ ya nke nzukọ o mepụtara na nke ọ bụworo ihe nnọchianya ruo ọtụtụ iri afọ. N'ezie, na-agbaso mmeghachi omume nke Open Source Initiative (OSI), ọtụtụ narị ndị na-akwado sọftụwia na-akwadoghị bịanyere aka n'akwụkwọ ozi na-arịọ onye guzobere Free Movement ka ọ weghachite apron ya, kamakwa ọgbakọ kansụl n'efu.
Mgbe n'aka nke ọzọ, ọtụtụ puku mmadụ gosipụtara nkwado ha na-enweghị atụ na ha na-ahazi ime ka Free Software Foundation guzogide nrụgide ahụ.
Nke a bụ naanị echiche nke ndị na-akwado ma na-achọta, mana eziokwu ahụ bụ na RMS alaghachila na FSF esetịpụla usoro nke usoro ọ bụghị naanị n'ime usoro FSF kamakwa n'ọtụtụ obodo na otu.
Na ndị dị otú ahụ bụ ikpe nke John Sullivan onye kwupụtara ọkwa ya na nso nso a dịka onye isi oche nke Free Software Foundation, ọ dị kemgbe 2011 (nkọwa nke oge mgbanwe na nkọwa nke ịnyefe njikwa na onye isi ọhụụ John kwere nkwa ibipụta na ụbọchị ole na ole sochirinụ).
Mgbe afọ 18 na Free Software Foundation, ekpebiri m ịhapụ ọrụ m dị ka onye isi, na-arụ ọrụ na njedebe nke oge mgbanwe. Anyị ga-ekekọrịta nkọwa ndị ọzọ, gụnyere ozi gbasara mgbanwe ahụ, na obere okwu ole na ole, na ụbọchị ndị na-abịanụ. Ọ bụ nnukwu nsọpụrụ ijere ụlọ ọrụ a na ịrụ ọrụ n'akụkụ ndị ọrụ FSF, ndị otu na ndị ọrụ afọ ofufo n'ime afọ niile. Ndị ọrụ ugbu a kwesịrị ntụkwasị obi na nkwado gị zuru oke; ha nwere nke m n'ezie.
Ekwesiri ighota na ndi oru STR Foundation bu ndi kwesiri ntukwasi obi ma obu ihe ùgwù diri ijere Foundation ahu ma ha na ndi oru ya, ndi otu ya na ndi oru ya
N'otu oge ahụ, Kat Walsh, ọkàiwu ndi sonyere na okike nke Creative Commons 4.0 ikike, Ọ bụ onye otu ndị Board of Trustees nke Wikimedia Foundation na nke ndị ọchịchị na-achị Xiph.org Foundation, a mara ọkwa ịhapụ Board of Directors of the Free Open Source Foundation.
Kat gosipụtara na ịhapụ ịhapụ ekwesịghị ịkọwa dị ka nnabata nke echiche ngwanrọ n'efu. Inweta usoro a sitere na nghọta siri ike ma sie ike na ọrụ ị rụrụ na nzukọ a abụghịzi ụzọ kachasị mma iji kwalite ngwanrọ na-emeghe ụwa na ụwa. Kat kwenyere na Free Software Foundation chọrọ mgbanwe iji dozie nsogbu ndị dị ugbu a, mana ọ bụghị onye nwere ike mejuputa mgbanwe ndị a.
Ọzọkwa ọzọ nke mgbanwe na-ahụ site bụ na dịka usoro a chọrọ n'elu ịgbanwe ọchịchị nke STR Foundation, Geoffrey knauth, Onye isi oche nke STR Foundation, kwupụtara ọkwa nke otu onye otu ịtụ vootu ọhụrụ na Board of Directors iji gosipụta echiche nke ndị ọrụ ahụ wee họrọ ya site na STR Foundation. Ndị kansụl ahụ goro onye nchịkwa sistemụ Ian Kelling.
Nke a bụ otu ihe dị mkpa na mbọ FSF iji mata ma kwado onye ndu ọhụụ, jikọta onye ndu ahụ na obodo, melite nghọta na ịza ajụjụ, ma wulite ntụkwasị obi. A ka nwere ọrụ dị ukwuu a ga-arụ, ọrụ ahụ ga-aga n'ihu.
Amatala m na FSF nwere ezigbo ndị ọrụ na-arụsi ọrụ ike, mana yana ihe ịga nke ọma nke LibrePlanet 2021, yana ịgwa ndị ọrụ okwu n’oge esemokwu ahụ malitere ozugbo, enweghị m obi abụọ ọ bụla na ọ dị oke mkpa itinye ndị ọrụ aka karịa na mkpebi. -Realization na usoro mkparịta ụka. Ndụmọdụ ha nyere n’izu gara aga bụ nke bara nnukwu uru. Ekwenyesiri m ike na usoro a iji melite ọchịchị nke FSF ga-ebute nsonaazụ kacha mma n'ọdịnihu.
Ọzọkwa, enwere ike ịhụ na ọnụọgụ nke ndị binyere aka n'akwụkwọ ozi ahụ maka nkwado nke Stallman pere mpe karịa ọnụ ọgụgụ ndị binyere aka n'akwụkwọ ozi ahụ megide - 3693 bịanyere aka na Stallman, megide - 2811.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » John Sullivan gbara arụkwaghịm na FSF ma emekwala mgbanwe na FSTR
Congress Congress na-achọ nyocha Intanet
Otu esi ahọrọ nkesa ziri ezi iji mee ka ihe ịga nke ọma n’ọrụ gị